I-Gigantism, i-acromegaly kunye ne-dwarfism-zonke izifo zinomlinganiso we-neuroendocrine. Kwisigulane nge-gigantism, kukho ukukhutshwa kwe-hormone yokukhula ngokweqile, oko kukuthi, ubukhulu besandla, iinyawo, amathambo ebuso kunye nezitho zangaphakathi zanda. Zonke iinkqubo zokuxilonga ziphulwa. Isifo senzeke ngezizathu ezahlukeneyo. Ingaba yintlungu, intlungu ngexesha lokukhulelwa nokubeletha, isifo sengqondo. Ngokuqhelekileyo, i-acromegaly ibangelwa isisu se-pituitary (i-cerebral appendage). Izigulane ezine-acromegaly, yaye oku kudla ngokuba ngumfazi osusela kwiminyaka engama-20 ukuya kwe-40 ubudala, rhoqo bephantsi kolawulo lwagqirha: i-oculist, i-endocrinologist, i-neuropathologist.
I-Gigantism iqhubekela phambili ngenxa yemali enkulu yokukhula kwehomoni, kodwa, ngokungafani ne-acromegaly, ukukhula kukulinganisela ngexesha elifanayo. IGigantism ivela kuphela kubantu abaselula abangaphantsi kweminyaka eyi-18-19. Ngokuqhubela phambili kwesi sifo, ubuthathaka, ukukhathala ngokukhawuleza, kunye nokuphulwa komfutho wegazi ziyabonwa.
Ukutshatyalaliswa komzimba okanye i-pituitary nanism, iyenzeka xa i-pituitary gland iphukile ekuqaleni kwasebuntwaneni. Umzimba onjalo nesifo uvelisa i-hormone encinci yokukhula, ukuze abantwana balele emva kokukhula ukusuka koontanga babo ngo-10-15, ngamanye amaxesha ngama-20%. Ngelo xesha, ukuvuthwa kwezesondo kulibaziseka, akukho zibonakaliso zesibini zesini. Abazali bafanele baqaphele i-gap yokukhula kwabantwana abaneminyaka engama-2-5. Ukuba ufumana ukuphambukiswa okuncinci, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho. I-Gigantism kunye ne-dwarfism iyaphathwa ngamachiza, okokuba, njengomthetho, unikeza umphumo ontle kwaye ozinzile.
Isifo esine-acromegaly siphula ngokukhawuleza, siqala ngokusuka kwintlungu, ukukhathala, ukuphazamiseka kwezandla. Ulusu luba luncinci kwaye luye lugqithise kancane, impumlo ikhula inkulu, kungekhona kuphela imilomo kodwa nolwimi lukhula, oludala ubunzima bokutya nokuthetha. Kwakhona, ulusu luxhomekeke emva kwentloko, ungavumeli ukujikeleza intloko. Iibhulabhisi kunye neenyawo ziba zikhulu, ukukhula kweenwele ezisebenzayo ziyabonwa, kwaye oku akunjalo kuphela entloko. Ukongezelela, umbono ubonakalisa, imisebenzi ye-genitourinary system ayiyiyo.
Ukuba kukho imiqondiso yesifo kwi-pituitary gland, kufuneka uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza. Ukubeka i-diagnostic echanekileyo kunokuthatha ixesha elide, kwaye unyango lwangaphambili olusuka ku-acromegaly luqala, ngcono iziphumo zalo ziya kuba. Unyango lwe-acromegaly lude kwaye luyinkimbinkimbi, ngamanye amaxesha kusetyenziswe unyango lwe-radiation. Ukunciphisa okanye ukuphelisa ngokupheleleyo ukukhululwa kwe-hormone yokukhula kunokuphandwayo okanye unyango. Zonke iintlobo zonyango zenza imeko yesigulane, kodwa iinkqubo ezenzeka ngaphambi kokuqala kwonyango, ngelanga, ayinakwenzeka.
Ezi zifo azizange zifundwe ngokwaneleyo ukucebisa naluphi na amanyathelo okukhusela. Zikhusele ekubeni uxinzelelo olungadingekile, izifo ezithathelwanayo, iingxaki. Abasetyhini banconywa ngokuthintela ukukhutshwa kancinci kwimiqathango yokuphuluka ngexesha lokuya kwinyanga ukuya kubudlelane nogqirha, ukubhalisa kwintetho yabesifazane ngexesha lokukhulelwa kuba mncinci, ukukhipha isisu kuphela kumaziko ezonyango. Oku kuya kunceda ukuphepha i-acromegaly, i-gigantism kunye ne-dwarfism.
Intloko kwiphondo yengingqi
Yintoni enokuyenza xa iingxaki zeememori zivela
Iindwangu ezinamafutha ngamakhowe ePortobello
Ungakuphephelela njani uxinzelelo ngexesha leseshoni?
Ukupheka kwentsapho yolonwabo
Ukushisa kunye nokuncelisa
Ukuzivocavoca kwinqeni elincinci kakhulu
Indlela yokubonisa isipho somhla wokuzalwa
I-phytotherapy yangaphandle kwimilenze yengxaki